Rose bezilokhu kubhekwe indlovukazi yimuphi engadini, nokunakekela kudinga ulwazi olukhethekile namakhono. Ukuhoxiswa izinhlobo abaqatha rose ukutshala akusiko kuphela ilungelo lokupha ezifundazweni eziseningizimu ye-Russia, kodwa futhi enyakatho, bakuphi aphathiswe efanele, kukhona Sebawoti uyajabula ngaphezu konyaka owodwa. Shelter roses for ubusika e Leningrad esifundeni has izici zayo siqu, ngoba abazi njalo ebusika snowy, futhi izinga lokushisa umehluko kungaholela ekufeni zalesi sihlahla.
Okunhlobonhlobo ngoba Leningrad esifundeni
Akukhona njalo rose itshalwe ngesikhathi kahle kakhulu ukusinda isithwathwa esinye sezizathu kungaba:
indlela okungafanele ziphuzo zazihluzwa. Emandleni esiyize abamba ukushisa kanye rootstocks kwakungafanele frost njalo.
Okunhlobonhlobo. Park noma landscape obuka okungenani esabe frost futhi basinde ubusika ne Ukuvikelwa omncane. Hybrid Itiye amamaki ukugibela kukhona ukushisa-onothando, befuna ukwakhiwa amadivayisi zokuzivikela. Sredneustoychivye - floribunda enezici nezinhlobo amancane rose.
izinhlobo ezinkulu umsebenzi
Shelter roses for ubusika Leningrad esifundeni senzeka ngezigaba eziningana:
ukusebenza ngamunye has izici zayo siqu, kuncike esifundeni kanye nohlobo rose sezulu. Inkathi nje isuke ibangelwa umehluko lokushisa ngesikhathi imisebenzi wokulungiselela uma isiphambeko efudumele, kusukela nendawo yokuhlala akakwazi seshit, lapho okokuqandisa okusheshayo ngezansi -5 ° C ezisheshayo okunenjongo.
Ukuqala umsebenzi wokwenza amalungiselelo
Shelter roses for ubusika Leningrad esifundeni iqala kusukela engxenyeni ehlobo yesibili. Ngokusho umbala engokwemvelo ikhalenda, ukulungele iwe, ukubambezela yonke inqubo sokwanda okusheshayo, futhi akuvunyelwe nakancane ngalesi sikhathi:
Ngasekupheleni kuka-July - ukwenza inselele ezikhulayo inkathi Umanyolo (nitrogen).
Ekuqaleni autumn - usike izimbali kanye efihlekile ngiwunqamule wilted, ukuze singathwesi liphazamisane isitshalo ukuqedela umjikelezo egcwele izimbali.
Noma yiziphi izenzo ngenhla ingaba njengendlela umfutho sokuthuthukiswa amahlumela, okuyinto engathandeki kakhulu ngaphambi ukuqala yesithwathwa.
Phakathi ngenyanga yokuqala autumn kuyadingeka ukuze zalisa potassium besendle magnesium amalungiselelo, ukuqinisekisa ukuthi zinamanzi kwezakhi ekukhuleni kangcono entwasahlobo.
Ngalesi sikhathi, kuyinto efiselekayo athambise umhlabathi, ngakho ukusebenza ungaqala inqubo yokukhula imbali.
Ekupheleni kuka-September, amahlamvu sezihlahla ziqala ukuze ome, futhi nje kufika isikhathi ukususa amahlamvu eseliphuphile. Kufanele uqale amaqabunga ogulayo, ekupheleni ekwindla kuya ekuqaleni ikhava, kuyinto efiselekayo ukwenza ukususwa namahlamvu omile, kodwa kungenzeka ukuthi ubeke umkhawulo yokuvuna evutha iziguli kuphela amahlumela.
izinyathelo okuphoqelekile ukuthi ahlinzeke ezinhle ebusika kanye entwasahlobo ukuqhakaza rose - yokukhosela ebusika futhi izihlahla. Uhlobo lomsebenzi kunqunywa ezihlukahlukene simila.
Nquma wonke ezihlabayo kuyadingeka, kungakhathaliseki ubudala. isusiwe:
Ugula futhi ubuthaka neziqu, okuyinto abakwazi ukuthutha frost futhi bafe, okungaholela ukutheleleka ehlathini.
Ngemva ilungiswe isihlahla, kuye ngokuthi lingakanani, kufanele bube ngaphezu kuka 5 amagatsha ayinhloko, bonke abanye kufanele kususwe. Wonke umsebenzi kufanele kwenziwe kuphela ithuluzi ebukhali, kusale cut etshekile.
Ukuphakama amahlumela bavunyelwa ukuba ubusika, ke kuncike ezihlukahlukene.
izinhlobonhlobo Frost nemithi epaki cishe mfushane, aphethwe nje yokuhlanza ezivimbelayo yokuhlanza amagatsha ababuthakathaka.
I hybrid tea, floribunda nezinye izinhlobo ngaphansi nemithi usike iphesenti enkulu zasemoyeni ingxenye engashiyanga ezingaphezu kuka 5 nezinso.
indlela ngamunye kudinga rose ukugibela, siphephelo isivuno ebusika futhi othize ngenxa eside neziqu, okuyinto kakhulu mfushane. Kuyadingeka ukuba asuse izingxenye onesifo futhi omile, kanye wonke amahlamvu.
Ukunquma ukukhipha ahlabayo, ungaqala ukuhlanza izwe pokrova.Uborka kumelwe siqaphele, ngoba ikusasa lalowo kombhede akufanele kube yini kungaba imbangela bola.
Ukubulala amagciwane futhi hilling
Abalimi abaningi ukubuza lo mbuzo: ". Indlela ukusingatha rose phambi indawo ebusika" Kukhona izixazululo eziningana:
okufana Classical: 5% yensimbi sulfate, noma ingxube bordoskaya. Kodwa iziqinisekiso more yokwelapha izifo kumele kwenziwe ehlobo, futhi lokhu, abalimi abaningi basebenzisa igama elithi "fitosporin", okunikeza magciwane nomphumela omuhle.
Indlela elula akuyona njalo indlela ephumelelayo ngokusebenzisa umlotha. Fafaza phansi futhi amahlumela ezimanzi: eyodwa ikani umlotha ezomile ngalinye 1 m 2.
Ridging - inqubo kuyinsakavukela for balimi eziningi, esimweni roses kuyinto efiselekayo ukufeza isihlabathi, ngemva magciwane, njengoba inhlabathi ngaphansi ehlathini elakhiwa sebuningini amagciwane ahlukene athile kanye nesikhunta. Boulder ukuphakama incike ubukhulu ehlathini, ngokwesilinganiso okungenani 20 cm. I okuxekethile ukungaguquguquki isihlabathi ivikela ohlelweni impande, hhayi ukwakha okokuqandisa uqweqwe, ukuthuthukisa komoya okuhle zezitho komhlaba zalesi sihlahla.
Ukucubungula rose phambi indawo ebusika futhi hilling kwenziwa kusezweni elomile, futhi amahlumela. Inkinga ngalesi sikhathi kungase kube imvula, akukhona okungavamile ukuba likhithike, ikakhulukazi ekwindla. Yield elula: ukusetshenziswa polyethylene ngesimo i-umbrella noma etendeni. Cover lapho kuyinto efiselekayo Bush hhayi kuphela, kodwa futhi inhlabathi.
It is hhayi Kunconywa ukuba uqale inqubo full-scale ukufeza zifudumele -5 C ° (lokushisa esibucayi izinhlobo eziqinile enezimfanelo ongaphakeme), njengoba ukugoqa kusasekuseni ukuqagula singanciphisa ehlathini. Ngokuvamile ukumboza kwesikhathi - kungcono ekupheleni kuka-October-ekuqaleni kukaNovemba.
Labor okokufaka kuncike ezihlukahlukene, ekhandlayo kakhulu ukugibela rose, siphephelo isivuno ebusika futhi sihamba nge okukhulu isikhathi zatrachivaniya nezisetshenziswa, njengoba amagatsha sezihlahla kungukuthi ukusika ngaphambi ubuthongo basebusika, badinga ukuze agobe kahle. Lokhu kumele kwenziwe kancane, uma kunesidingo, kancane athambise umhlabathi ngaphansi isihlahla. Imicu bophezela embondelene phezu wabeka ngaphambilini by straw, noma izihlangu lapnikom ebusweni nemicengezi isilungisiwe.
Isivikelo izinhlobo ukushisa-onothando
Idinga ukunakekelwa okukhethekile futhi rose ukugibela, umpheme ebusika ezingase zithathwe ngezindlela eziningi, ukukhetha incike lokufikela esifundeni kanye nokwenzeka abanikazi:
Isihlangu. Esinokwethenjelwa isikhathi kukho, esihlinzeka iphesenti eliphezulu kakhulu sokusinda umbala ngisho ukubanda okwedlulele.
Dinga khona izipikili ezimbili ziboshelwe amabhodi sokhuni, ubude kuncike ukuphakama imbali, ububanzi 90 cm.
Setha phezu isakhiwo esimisiwe amagatsha.
Shayela uqhekeko ku phansi ukubamba ophahleni ku nokuchema.
Top isebangeni ukuvikelwa umswakama: ifilimu lapnikom. Isikhathi esining impela zikhona izincomo ukugcwalisa umhlaba ifilimu, kodwa akuzona zonke balimi hamba, esaba ukuvela condensate ngokweqile.
Isihlangu senziwa kwamapulangwe sokhuni, ngokuzikhethela behlisele uvalwe, khona izimbotshana kwamukelekile. Umbandela esiyinhloko - nokwethenjelwa, ezisindayo zeqhwa emigodini naphula isakhiwo kokulimaza isiswebhu rose.
Lisetshenziswa njengendlela indlela Uhlaka kanye ngombala.
Esimeni sesibili amahlumela ezihlobene embozwe amagatsha ngesihlahla sonwele futhi lutrasilom, ngokucindezela phansi emhlabeni izitini, kwamapulangwe ngoseyili.
Njalo - abamba ukushisa nge izinhlobo ezehlukene izihlahla phakathi esimelela le ekhuphuka rose, umpheme ebusika kulokhu kuzodingeka izici zayo siqu.
Amagatsha ayikwazi sehliselwe phansi, badinga ukulungisa izikhala avimbekile-izisekelo, bese wenze ophahleni.
Shelter amamaki floribunda, hybrid tea
Ezimweni eziningi, yokukhosela ungene ebusika eLeningrad esifundeni esimaphakathi izinhlobo eziqinile kwenziwe indlela umoya-ezomile.
Ubuhle: komoya okuhle, kulula akhiqize
Uzimele Foundation. Amabha metal Kufanele noma zokhuni futhi komzila. Ukuphakama incike ehlathini, ngokuvamile ngenhla nje 50 cm.
Uthango kufanele kube ngokulinganayo ahaqe lonke isitshalo.
Ukwakhiwa ikhava ukwahlukanisa, ukulungisa ukuze uzimele. Ochwepheshe abaningi batusa ukusebenzisa lutrasil kwabantu esiphezulu, isici - isakhiwo esiwuhogelayo ngaphandle ekuvimbeleni air kwegazi kanye absorbency ezinhle umswakama ngokweqile. Futhi ngokuvamile kakhulu esetshenziswa amagatsha ngesihlahla sonwele noma izinto ngakwesokunene ngesimo amakhadibhodi, mata nokwelukiweyo izindlela.
I yangaphandle ingxenye ukuhlukanisa kusukela polyethylene ezimanzi, eligoqiwe izingqimba eziningana. Imikhawulo ngesikhathi esifanayo ihlale ivuliwe.
Ngendlela Ayamukelayo isicelo wesifunda enezingxenye ezimbili esehlanganise lapnika lutrasila futhi ngaphandle ifilimu, ukugwema ukwakheka condensate.
Ingxenye engezansi prikopat ukwahlukanisa, ngoba ukuthembeka okukhulu ukwenza amatshe.
Kuyinto kudingekile kuphela ukuvala ingxenye engenhla ehlathini, le lateral ukwahlukanisa izingxenye ivinjelwe uma esingeqile -15 °.
Shelter ungene ebusika eLeningrad esifundeni kumele umoya, njengoba njalo lokushisa izinguquko zisenza sibe ukufingqa, okuzuzisayo ukuthuthukiswa izifo inhlabathi. Inani elihle kunawo ubusika rose izifunda snowy endaweni, esifundeni esempumalanga nemvula encane kufanele unake okukhethekile ukwahlukanisa, okwenza kube umoya kakhulu futhi ukumelana frost.
Ikhukhamba Conny F1: Izibuyekezo grade
Avens: ezikhula imbewu. Geum Quellyon: ezikhula imbewu
I amagilebhisi ugula? Isikhutha: ukwelapha izifo, izimbangela zezinkumbulo kanye nokuvinjelwa
Kuhle Winter isixha ngezandla zabo. Winter isixha Bridal ngezandla